कोरोनालाई जित्नुभयो ? यी कुरामा तत्काल ध्यान दिनुस् | Safal Khabar
कोरोनालाई जित्नुभयो ? यी कुरामा तत्काल ध्यान दिनुस्
बुधबार, २९ बैशाख २०७८, १३ : २२
काठमाडौं ।अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेको छ । कोरोनाभाइरसबाट निको भएपछि धेरैजसो मानिसहरुको शरीर एन्टिबडी बनिरहेको छ । यो एन्टिबडीले शरीरलाई भाइरसको पुनः संक्रमणबाट जोगाउने गर्छ । यद्यपि, यो एन्टिबडी शरीरमा कहिलेसम्म रहन्छ, त्यसमाथि अहिलेसम्म पनि बहस जारी छ ।
यस्तोमा कोरोनाभाइरसबाट ठिक भइसकेका मानिसहरु पुनः संक्रमित भएको खबर पनि आइरहेका छन् । कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित हुनेहरुमा कि त वृद्ध–वृद्धा छन् कि त लापरवाही अपनाएका व्यक्ति छन् । कोरोन भाईरसको संक्रमण भएर निको भैसकेका अथवा कोरोनालाई जितिसकेका मानिसहरुले तलका यी कुरालाई अवश्यक ध्यान दिनुपर्छ ।
यसका लागि कोभिड–१९ मा शरीरका कुन हिस्सा वा अंग प्रभावित हुन्छन् भनेर थाहा पाउन आवश्यक छ ।
अहिले पनि धेरै मानिसहरु यसलाई रुघा–खोकी लाग्दा आउने ज्वरो जस्तै ठान्छन् । मानिसहरुलाई लाग्छ कि कोभिड–१९ हुँदा फोक्सोमाथि मात्रै असर पर्छ ।तर यस्तो होइन ।
यो रोग नयाँ भएकोले यसले शरीरका अन्य अंगमा निम्त्याउने असरबारे पनि बिस्तारै थाहा भइरहेको छ ।
कोभिड–१९ का कारण मुटु, दिमाग, मांसपेशी, धमनी र नसा, रगत, आँखाजस्ता शरीरका थुप्रै अंगमा पनि असर पर्ने प्रमाण भेटिइसकिएको छ ।
यसैकारण हृदयघात, डिप्रेशन, थकान, जीउ दुख्ने, रगत जम्ने र ब्ल्याक फंगसजस्ता समस्याको मानिसहरुले सामना गरिरहेका छन् ।
धेरैजसो कोभिड–१९ का बिरामी घरमै बसेर निको भइरहेका छन् ।
उनीहरुलाई उपचारका लागि अस्पताल जान आवश्यक पर्दैन । तर घरमा बसिरहेका बिरामीका लागि पोस्ट कोभिड–१९ केयर आवश्यक हुन्छ ।
यदि तपाईं आफैं स्वस्थ महसुुस गरिरहनुभएको छ भने नेगेटिभ रिपोर्ट लिइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन । त्यसैले पुनः परीक्षण नगराउनुहोस् । १४ दिनपछि आइसोलेशनबाट बाहिर निस्कन सक्नुहुन्छ ।
निको भइरहेको क्रममा खानपिनको विशेष ख्याल राख्नुहोस् । प्रोटिन र हरियो सागसब्जी धेरै मात्रामा खानुहोस् । यस्तो यसकारण किनभने यो रोग लाग्दा शरीरको प्रतिरोधी क्षमता कमजोर हुने गर्छ ।
खान मन लाग्दैन भने थोरै थोरै समयको अन्तरालमा खानुहोस् र पानी सही मात्रामा पिउनुहोस् ।
नियमित योग र प्रणायाम गर्नुहोस् । ब्रिदिङ एक्सरसाइज गर्नुहोस् र एकैपटक धेरै काम नगर्नुहोस् ।
निको भएको केही दिनसम्म (१५–३० दिन) अक्सिजन, ज्वरो, रक्तचाप, सुगरको लेभलमा ध्यान दिनुहोस् ।
यदि तपाईं कोभिड–१९ का साथै अन्य रोगबाट पनि ग्रसित हुनुहुन्छ भने निको भइसकेपछि पनि जे औषधी बताइएको छ, त्यो खान जारी राख्नुहोस् । यस्तो बिरामीले विशेष सावधानी अपनाउन आवश्यक छ ।
यसका साथै कोभिड–१९ बाट निको भएका बिरामीले धुम्रपान र मद्यपानबाट टाढै बस्नुपर्छ ।
ती समस्याबारे कुरा गर्दै उनी भन्छन्, ‘केही बिरामीलाई पछि गएर फोक्सोसँग जोडिएका केही समस्या देखिन सक्छ – जस्तै फोक्सो संकुचित हुनसक्छ । केही बिरामीमा मुटुसँग सम्बन्धित समस्या देख्न सकिन्छ । यस्तो मामिलामा कुनै एउटा गाइडलाइन दिन सकिँदैन ।’यस्ता बिरामी आफ्नो डाक्टरको सल्लाहमा नै रिकभरी पिरियडमा हिँड्नुपर्छ ।
यतिबेला मास्क लगाउने, बारम्बार हात धुने र दुई गजको दुरी ख्याल राख्न पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।